Naxaas duuban oo la duubay | China Rolled Copper Fils Manufacturers, Suppliers
Daaweeynta naxaasta RA -du waa hal dhinac oo si adag loo xardhay bireedka naxaasta si loo kordhiyo xooggiisa diirka. Dusha sare ee ka samaysan bireedka naxaasta ahi wuxuu jecel yahay qaab qabow, taas oo sahlaysa in lagu dahaadho agabyo kale oo ay u yar tahay in laga siibto. Waxaa jira laba hab oo daaweyn guud: mid waxaa la yiraahdaa daaweynta gaduudan, halkaas oo maaddada ugu weyn ay tahay budo naxaas ah oo midabka dusha sare uu guduudan yahay daaweynta ka dib; midda kale waa daaweyn madoow, halkaas oo maadada ugu weyn ay tahay cobalt iyo budada nikkel oo midabka dushiisa waa madow daaweynta ka dib.
Birta nikkel waxay leedahay xasilooni sare oo hawada ah, karti dheelitirnaan oo xoog leh, waxay samaysan kartaa filim dheef -dhaaf ah oo aad u khafiif ah hawada, waxay iska caabin kartaa daxalka alkali iyo asiidh, si badeecadu ay kiimiko ahaan ugu xasilloon tahay shaqada iyo deegaanka alkaline, ma fududa in la midabeeyo kaliya lagu qayilo ka sarreeya 600 ℃; lakabka dahaarka ee nikkel wuxuu leeyahay adhesion xoog leh, ma fududa in la dhaco; lakabka dahaarka ee nikkel wuxuu ka dhigi karaa dushiisa wax adag, wuxuu hagaajin karaa badeecada iska caabinta xirashada iyo aashitada iyo iska caabinta daxalka alkali, badeecada xirashada iska caabinta, daxalka, waxqabadka ka hortagga miridhku aad ayuu u fiican yahay.
RA Coils Foils for FPC
Biraha naxaasta ah ee looxyada wareegga waa alaab bireedka naxaas ah oo ay soo saartay oo ay soo saartay CIVEN METAL gaar ahaan warshadaha PCB/FPC. Xaashidan naxaasta ah ee la duubay waxay leedahay awood sare, dabacsanaan, ductility iyo dhammayn dusha, iyo kulaylkeeda iyo korontaduba way ka fiican tahay badeecadaha la midka ah.
Foils Copper Rolled for Battery
Foil-ka Baaskiilka ah ee La Duudduubay waa qalab kathode ah oo ay soo saartay CIVEN METAL gaar ahaan baytariyada heer-sare. Dhumucda lebiska iyo qaabka fidsan ee bireedka naxaasta ah ayaa sahlaysa in la huwado oo aan la iska bixin;
Foil Bronze RA
Naxaasku waa walax ka samaysan naxaas oo lagu dhalaaliyo biro kale oo naadir ah ama qaali ah. Isku -darka kala duwan ee alwaaxyada waxay leeyihiin astaamo jireed iyo codsiyo kala duwan.
RA -naxaas bireed
Naxaasku waa daawaha naxaas iyo zinc, oo inta badan loo yaqaan naxaas sababta oo ah midabka dusha jaalaha ah ee dahabka ah. Zinc -ka naxaasku wuxuu walxaha ka dhigaa mid adag oo adkaysi u leh abrasion, halka maaddadu ay sidoo kale leedahay awood giijis oo wanaagsan.
Maaddada birta leh ee leh naxaasta ugu sareysa waxaa lagu magacaabaa naxaas saafi ah. Waxa kale oo caadi ahaan loo yaqaannaa naxaas gaduudan sababta oo ah dusha sare ayaa u muuqda midab guduudan-guduud ah. Copper wuxuu leeyahay dabacsanaan heer sare ah iyo ductility. Waxa kale oo ay leedahay koronto iyo kuleyl aad u fiican.
Daasadda Plated -bireed Copper
Badeecadaha naxaasta ah ee hawada ku jira ayaa u nugul oksaydhka iyo samayska kaarboonka naxaasta ah ee aasaasiga ah, kaas oo leh iska caabin sare, tabinta korontada oo liidata iyo luminta gudbinta awoodda sare; ka dib dahaadhka dahaarka, alaabta naxaasku waxay samaysmaan filimada daasadda dioxide hawada dhexdeeda iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyinka biraha daasadda lafteeda si looga hortago oksaydhka dambe.
Beryllium bireed Copper
Beryllium Copper Foil waa nooc ka mid ah xalka adag ee ka samaysan dahaarka naxaas kaas oo isku daray farsamooyin aad u wanaagsan, muuqaal ahaan, kiimikooyin iyo iska caabinta daxalka. Waxay leedahay xadka xoojinta sare, xadka laastikada, xoog dhalista iyo xadka daalka sida birta gaarka ah kadib daaweynta xalka iyo gabowga.
Walxaha naxaasta-nikkel-ka waxaa caadi ahaan loogu yeeraa naxaas cad sababta oo ah dusha cad ee silvery-ka ah. Daawaha naxaas-nikkel waa biraha daawaha leh iska caabin aad u sarreeya waxaana guud ahaan loo adeegsadaa sidii wax impedance ah. Waxay leedahay isugeyn heerkulka iska caabinta oo hooseeya iyo iska caabin dhexdhexaad ah (iska caabbinta 0.48μΩ · m). Waxaa loo isticmaali karaa in ka badan heerkulka ballaaran.